Wararkii U Dambeeyay Suuqa Kala iibsiga Ee Wargeysyadu Qoreen! - Galmada.net
Wararkii U Dambeeyay Suuqa Kala iibsiga Ee Wargeysyadu Qoreen!
Akhristayaasheena sharafta leh meelkasta oo aad ka joogtaan dunida Ku Soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyada.
AllRunta.com ayaa idiin soo gudbinaysa dhamaan wararka suuqa kala iibsiga oo si toos ah u furmi doona 1 july ee inagu soo food leh Hadab wararkan waxa xuquuq dooda iska leh Wargaysyada ku hor qoran AllRunta.com kaliya way soo Turjuntay
Wakiilka Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay in weeraryahanka reer Sweden aanu wali go,aansan in uu ku biiro kooxda manchester united heshiiska 34 jirkan uu kula jiro kooxda Paris St-Germain ayaa dhacaya dhamaadka June (TF1 – in Faransiis).
Wararka ayaa sheegaya in Ryan Giggs la filayo in uu ku dhawaaqo in uu ka tagayo kooxda manchester united maalmaha soo socda (Mirror).
Juventus ayaa u sheegtay in ay 23-sano jirka qadka dhexe Paul Pogba uu ka tagayo kooxda xagaagan iyo Real Madrid oo ah meesha ay u badantahay in uu ku sii jeedo (Marca).
Dawacooyinku ayaa ku kalsoon in ay saxiixa weeraryahanka xulka qaranka france iyo kooxda Ac Milan Ku Garaaci karaan kooxda West Ham kadib markii ay wadahadal la fureen kooxda reer talyaani ee Ac Milan (Leicester Mercury).
Tottenham ayaa sii wadi doonta wadahadalada ay kula jiraan kooxda Southampton iyaga oo ku sii dhawaanaya saxiixa xiddiga qadka dhexe ee Victor Wanyama(Daily Mail).
Goolhayaha kooxda Arsenal Wojciech Szczesny ayaa la filayaa inuu kooxda ku soo laaban xagaagan kadib markii uu xilli ciyaareedkii dhamaaday si amaah ah kula joogay kooxda Roma iyaga oo indhaha ku haya sidii ay heshiiska ugu kordhin lahaayeen (Guardian).
Daafaca kooxda Everton Ramiro Funes Mori ayaa diirada u saaran kooxda Barcelona laakiin kooxda Catalan uma dhaqaaqi doono saxiixiisa xagaagan(Liverpool Echo).
Kooxda Liverpool ayaa ku sii dhawaanaysa in ay soo afjarto saxiixa xiddiga xulka qaranka Poland iyo kooxda Udinese ee Piotr Zielinski toddobaadka soo socda (Daily Express)
Kooxda Roma ayaa diirada saartay daafacyada Manchester City Bacary Sagna iyo Pablo Zabaleta si u helaan xagaagan (Il Messaggero)
Kooxda Everton ayaa xaqiijisay in saaka ay la soo wareegtay goolhaye Chris Renshaw oo ay kala soo wareegtay Kooxda Oldham Athletic (Goal)
Haweeenka Quruxda Badan Oo La Ogaaday Inay Ka Xanaaq Badanyihiin Dumarka Kale
DAAWO VIDEO:Xildhibaanada barlamaanka canada Oo Kenya Uga Digey Inay Xirto Xeryaha Qaxoontiga Dhadhaab,canada Codsi Ujeediyey..